Enomtsalane 1 BR 1.5 BA 19th Century Cottage - I-Airbnb
Enomtsalane 1 BR 1.5 BA 19th Century Cottage
Governor's Harbour, Central Eleuthera , Bahamas
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguSquires Estate
USquires Estate yi-Superhost
Ifakwe kwinduli enoxolo ejonge kwizibuko lendawo yokuhlala kunye namanzi ayo amahle aluhlaza, iHolo yeToad iyinxalenye yengqokelela yezakhiwo ezisibhozo ezibuyiselwe kakuhle zenkulungwane yeshumi elinesithoba.
Le ndlu yangasese inegumbi lokuhlala elibanzi elinempahla entle yangoku kunye neyokudala, kubandakanya ipiyano enkulu.
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo libonisa zonke iimod-cons, kubandakanya indawo yokupheka yegesi eyakhelwe-ngaphakathi, i-oveni yombane, ifriji, ifriji, imicrowave, kunye nedishwasher. Indawo yokutyela inezihlalo ezine kwitafile ye-mahogany yakudala. Kukho negumbi lomgubo kweli nqanaba.
Iveranda yomgangatho ophantsi yindawo ezolileyo nemnandi yokuphumla, ijikelezwe ziigadi ezenziwe ngobuchule kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kumgangatho wequla ekwabelwana ngalo.
Kumgangatho ophezulu unegumbi lokulala elikhulu elinomgangatho ophantsi, elinebhedi enkulu, kunye negumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa. Idesika encinci yangaphandle inika umbono obanzi wolwandle kunye nokutshona kwelanga, kunye nezihlalo ezimbini.
Le ndlwana ibekwe kwi-Squires Estate, kwaye ijikelezwe yigadi eluhlaza elikhaya lemithi yeziqhamo, i-bougainvillea, i-hibiscus, ikhala kunye ne-coconut palm.
Izinto eziluncedo ziquka i-TV ye-flat-screen cable, i-air conditioning, i-intanethi engenazingcingo (i-WiFi), izinto zangasese eziluncedo, kunye neendawo zokupaka ngaphandle kwesitalato.
Idolophu yeGovernors Harbour, umgama wemizuzu emithathu ukuhla endulini, inengqokelela enomtsalane yamakhaya enkulungwane ye-19 kunye neecawe ezijonge kwizibuko layo eliyimbali. Thenga iintlanzi ezintsha kunye neekreyifishi rhoqo emva kwemini kubalobi kwidokhi yedolophu, okanye undwendwele iThala leeNcwadi laseHaynes elisanda kubuyiselwa, elisusela kowe-1897. Kukwakho neFriday Night Fish Fry, ipati yeveki nganye/elwandle edibanisa abakhenkethi, abanini bamakhaya besibini, kunye nabemi basekuhlaleni ngokutya, iziselo, kunye nokudanisa esitratweni!
I-Governors Harbour ineevenkile ezithengisa ukutya, iivenkile zokutyela, iivenkile zotywala, iibhanki ezimbini ezine-ATM, indawo yokubhaka, iivenkile zezipho, kunye neklinikhi yezonyango.
Umbuki zindwendwe ngu- Squires Estate
We are a collection of properties that offer old world Bahamian charm with the luxuries and amenities that travelers have come to expect. There is no better way to live your islan…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Governor's Harbour